अध्ययन बिदा लिएर राजनीतिक नियुक्ति - निर्माण खबर
अध्ययन बिदा लिएर राजनीतिक नियुक्ति
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एकजना डिनले अध्ययन विदा लिएर राजनीतिक नियुक्ती लिएको खुलासा भएको छ ।
सहप्राध्यापक घिमिरेले एक वर्षे अध्ययन विदा लिएर चार वर्षे अवधि रहने (प्रवन्ध निर्देशक) पदमा नियुक्ति लिएका हुन् । ई. घिमिरे तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पालामा नियुक्त भएका हुन् । घिमिरे स्वयंले अध्ययन विदा स्वीकृत गराएर राजनीतिक नियुक्ति लिएको अनलाइनखबरसँग स्वीकार गरेका छन् …
Previous articleकर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक किन चल्यो मुद्दा ?
Next articleसाउनको पहिलो साेमबार, पशुपतिमा भक्तजनहरुको भीड (फोटोफिचर)